Ighe donuts na Thermomix, anyị nwere ihe eji megharịa ọnụ maka Ista - Ntụziaka | Ntụziaka
Ngela | | Ezumike na Dbọchị Pụrụ Iche, Ihe ọerụ Dụ maka ụmụaka
Akpụkpọ anụ nke ọkara lemon,
na oroma bee
Akara 150 shuga
2 àkwá organic L
150 ml. ihe ọṅụṅụ oroma
150 kr. Nke oliv
600 kr. ntụ ọka achịcha
1 sachet nke 16 gr. ntụ ịme achịcha
obere mmanụ oliv acid maka ighe
Anyị na-aga n'ihu na usoro anyị Ista Ezi ntụziaka. Oge a anyị ga-akwadebe donuts ọdịnala eghe, anyị ga-eji igwe Thermomix mee ntụ ọka ya. Anyị ga-enweta a finer na fluffier udidi na donuts na-ekele ekele zuru oke nke a na-enye site na robot kichin a. Kedu ka anyị ga-esi nweta ụfọdụ donuts eghe dị iche na nke ndị ọdịnala? Na-agbakwunye ngwa nri na aromas pụrụ iche na nhazi: wepụ vanilla, obere nutmeg ma ọ bụ cloves, bee nke mkpụrụ osisi citrus ndị ọzọ na-abụghị lemon na oroma ... Do ma ihe ị ga-agbakwunye? Ka anyị mara!
Iji malite, anyị na-egweri shuga. Anyị na-agbanye ya na iko Thermomix ma tinye ya na 30 sekọnd na ọsọ na-aga n'ihu site na 5 ruo 10. Anyị na-etinyezi na ya oroma na lemon bee. Anyị na-eme mmemme maka 30 sekọnd ọzọ.
Anyị na-akwadebe mgwakota agwa n'onwe ya. Tinye akwa, ihe ọ orangeụ orangeụ oroma na mmanụ na iko ahụ. Anyị na-eme mmemme 20 sekọnd na ọsọ 5. Ugbu a, anyị na-agbakwunye ntụ ọka, yist na nnu. Anyị na-emechi iko ahụ na anyị na-ekekọta mgwakota agwa mmemme 1 nkeji na ọgọ ọsọ.
Wunye mgwakota agwa n'ime efere, kpuchie ya na akwa plastik ma ọ bụ akwa ma hapụ ka ọ zuo ike maka nkeji iri abụọ. Oge gafere, anyị ga-akpụ donuts. Ọ ka mma na anyị ga-ete mmanụ aka anyị. Anyị na-akpụ bọọlụ etu ukpa wee jiri mkpịsị aka anyị pịa etiti ha iji nweta ọdịdị donut.
Anyị na-ekpo mmanụ dị ukwuu na pan nke miri emi iji ghee donuts. Iji kpochapụ ekpomeekpo nke mmanụ ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya na obere acidity, anyị nwere ike "ighe" lemon bee maka sekọnd ole na ole tupu ịmalite esi nri donuts. Ozugbo donuts bụ aja aja aja, gbanye ha na akwụkwọ kichin ma jiri shuga tee ha.
Na Recetin: Ifufe fritters jupụtara achịcha dị iche iche, na Ista dị nnọọ n'akụkụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Recetin » Ntụziaka » Ihe ọerụ Dụ maka ụmụaka » Ighe donuts na Thermomix, anyị nwere ihe eji megharịa ọnụ maka Ista
Ezi ụtụtụ, usoro a dị m mma, mana m ga-achọ ịma ma yist ahụ ọ bụ kemịkalụ ka ọ bụ na ọ si na ebe a na-eme achịcha kpọrọ nkụ, echere m na ọ ga-abụ kemịkal
Zaghachi MIGUEL GARCIA BONAHERA
Eeh, n'okwu a anyị kwuru yist kemịkal. Ga-achọ envelopu.
Ndewo, naanị m mere mgwakota agwa, ọ dịkwa ụtọ. Daalụ.
Izu ụka a ka m mere nhazi gị, ha na-apụta nke ọma. Daalụ maka uzommeputa a.
M ga-eme usoro nri gị n'ihi na ọ dị ka ihe na-atọ ụtọ, emere m ya dị ka nne m, mana echere m na nke a ka mma. Echiche kacha mma.
Ga-agwa anyị otu ha si dabaa gị.
Ezi ntụziaka gị na-amasị m. Echiche kacha mma.
Ndewo, emere m ya otu oge ma ụfọdụ mpịakọta dị n'ime, ọ dị mma na mpụga.
Ndewo Maria, o yikarịrị ka ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ nke mmanụ frying ahụ dị elu nke ukwuu ma ha na-eme ya n'èzí ngwa ngwa ma n'ime ha enweghị oge. Ọ bụrụ na ị gbalịa ọzọ, gbalịa itinye ọkụ ntakịrị looser nke mere na ha nwere oge esi nri n'ime tupu browning n'èzí :)
Zaghachi Bárbara Gonzalo
Gbalịa ighe ha na obere ọkụ na ogologo oge.
Followinggbaso uzommeputa dị ka ọ dị, mgwakota agwa na-apụta nke ukwuu aja!
Kedu nke nwere ike ịbụ n'ihi? Emegaghị m edozi ihe ọ bụla ma ọ bụ oge ọ bụla.
Zaghachi Natividad López
Ndepụta ọnụọgụ na ọnụọgụ na-efu
Agbalịrị m ụfọdụ anise flavored donuts. Enwere ike itinye mmanya a n'emeghị ka mgwakota agwa sie ike?
Anwụrụ ọkụ salmọn na-apụta, tụgharịa ha!
Sandwiches mbụ maka nnọkọ Fraịdee